Intengiso yakho ephumayo ayisebenzi ngaphandle kwemizamo engenayo | Martech Zone
Ukuba kudala ufunda ibhlog yam, uyazi ukuba igama Ukuqobisana uhlala endithumela kumsindo ongaboniyo. Abantu abangaphezulu kweSoftwareAdvice bathumele inqaku elineenkcukacha, Ukuthengisa ngaphakathi nangaphandle okuphumayo: I-Primer yeeNewbies okanye iiSwitchers.
Isikhokelo senza umsebenzi ogqwesileyo wokuhamba ngeendlela, iyantlukwano, kunye nezixhobo zamacebo angenayo kunye nezicwangciso ezingaphandle. Kubaluleke kakhulu ukufundwa ngoko ke khangela. Nantsi enye yemizobo:
Ukuphuma kungasebenzi kakuhle ngaphandle kokungena
Sisebenza nemibutho engabaqalayo encinci yonke indlela eya kumashishini amashishini. Akukho ngaphandle kwalo mgaqo ndiwabelana ngawo:
Intengiso ephumayo ayisebenzi kangako ngaphandle kwezicwangciso zokungena ngaphakathi
Ngaba ungenza umnxeba obandayo kwaye ukhulise ubudlelwane (ukuphuma) kunye nokuthengisa? Kunjalo! Khange nditsho ukuba ukuphuma kwayo akusebenzi ngaphandle kwezicwangciso ezingenayo, ndatsho ukuba kunjalo ayisebenzi kakuhle.
Ucinga ukuba yeyiphi into yokuqala eyenziwa ngumthengi okanye ngeshishini emva kokufunda ngeshishini lakho ngeposi ethe ngqo, ngomnxeba obandayo, okanye ngokundwendwela? Ngapha koko, ucinga ukuba benza ntoni ngelixa befunda ngeshishini lakho ngeposi ethe ngqo, ngomnxeba obandayo, okanye ngokundwendwela?
Iinkokeli zakho eziphumayo zikwenza uphando kwi-Intanethi!
Ukukhangela okulula kuGoogle ukufumana indawo yakho kunye nokusebenzisa umxholo wakho kuya kuhlala kulandela umnxeba obandayo. Emva koko baya kwi-LinkedIn kwaye baphonononge iziqinisekiso zakho nokuba ujongeka ulungile okanye hayi. Kwaye ke bafikelela kwimithombo yeendaba zentlalo kwinethiwekhi yabo ethembekileyo kwaye babuze, Ngaba ukhona umntu owakha wasebenza naba bantu?
Kwaye ngulo mzuzu ubalulekileyo wokuba iqela lakho eliphumayo kufuneka lichithe amatyelelo aliqela ukukhulisa ukukhokela, ukufaka uxinzelelo olungenangqondo lokuvala intengiso, okanye ukuphulukana nomntu okhuphisana naye owenza umsebenzi ongcono ngakumbi ngentengiso yabo engenayo.
Kutshanje sabelane ngento Ii-CMO bezikhangela kwiiarhente zazo, kwaye imiba emibini yayi ulwazi kwaye uncedo. Ukuba inkampani yakho, imveliso, okanye inkonzo ayimelwe kakuhle kukhangelo, kwimithombo yeendaba, nangokomelela ilayibrari yomxholo, amathuba akho okuvala intengiso anciphile.
Okubi nangakumbi, ukuba abo ukhuphisana nabo bamelwe kakuhle, ngoku unethemba elishushu eliya kuqala ukuthenga. Kwaye njengoko bejonga ukubekwa okungaqhelekanga kukhuphiswano lwakho kunye nobunkokeli kwindawo, baya kuba namathandabuzo malunga nokuba bangayisebenzisa okanye abayisebenzisi inkonzo yakho.
Kwaye ukuphuma kuphucula iinzame ezingenayo
Ndiza kongeza enye into apha ... ukungena ngaphakathi kusebenza ngakumbi ngentengiso ephumayo, nayo! Ngaba ukhe wabiza ithemba lokukhutshelwa izinto ezimbalwa, ivula ngokubonakalayo kwaye ucofe iincwadana zeendaba zakho ze-imeyile kwaye undwendwela indawo yakho ngamaxesha athile?
Ayiyo Ukuqobisanabantu! Iinzame zakho zentengiso eziphuma ngaphandle ziya kunyuka ngokumangalisayo ngesicwangciso esivelele sokuthengisa. Kwaye isicwangciso-qhinga sakho sokuthengisa siya kuphucula xa usebenzisa loo datha ukuhambisa iqhinga lakho lokuthengisa eliphumayo.
tags: urhwebo inboundIsikhokelo sentengiso esingaphakathiUkungena ngaphakathi xa kuthelekiswa nokuphumayoUkungena ngaphakathi nokuphumaukuthengisa okungaphandleIsikhokelo sentengiso ephumayoyesoftwareUkuqobisanavs
Juni 9, 2016 ngo-2: 27 AM
Enkosi ngolwazi. Ukungena ngaphakathi okanye ukuphuma, ukuthengisa kuyinxalenye ebalulekileyo yalo lonke ishishini kwaye ngaphandle kwayo awume ndawo kwimidiya.
Sep 21, 2017 kwi-6: 26 AM
Ukungena ngaphakathi kuye kwakho ixesha elide asikuboni oko ngenxa yokubaluleka okunikezelwe kwintengiso ephumayo. Kuba i-Intanethi iye yanda kuwo onke amakhaya, kunzima ukuphika ukufikelela okukhulu kunye nefuthe lentengiso engenayo.